Express Chitima kubva kuMunich kuenda kuPrague yakarova vakauraya vafambi muPilsen, Czech Republic
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Express Chitima kubva kuMunich kuenda kuPrague yakarova vakauraya vafambi muPilsen, Czech Republic
Kuputsa Kufamba Nhau • Czechia Breaking News • nhau • Rail Kufamba • Kufamba Wire Nhau
Dzidzisa Kurovera Pilsen, Czech Republic
Chitima cheMunich kuenda kuPrague chinogona kunge chakamhanya mwenje mutsvuku mushure mekuyambuka muganho kubva kuGerman kuenda kuCzech Republic zvichikonzera kuparara kwakaipisisa nechitima chedunhu padhuze nePilsen.
Nguva pfupi yapfuura 8 mangwanani ano, zvitima zviviri zvevapfuuri zvabonderana muCzech Republic padhuze nePilsen uye musha weDomažlice, guta riri munzvimbo yePlzeň yeCzech Republic.
Chimwe chitima chaive chitima chemukati chekufamba munzira kubva kuMunich, Germany kuenda kuPrague, Czech Republic.
Iyo inodzidzisa chitima EX 351 yakabatana neyemunharaunda chitima OS7406.
"Tinogona kusimbisa kuti vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu panzvimbo," akadaro mapurisa eCzech paTwitter.
Mapurisa akataura kuti maherikoputa aibatsira kutakura vanhu vakaendeswa kuzvipatara zviri pedyo. Emergency services pamwe nemadhipatimendi emoto emunharaunda vaive zvakare pachiitiko vachitarisana nevakawanda vafambi vakakuvara
Tsaona iyi inonzi yakaitika mushure me8 mangwanani nguva yemuno.
Sekureva kwezvisina kutaurwa, chitima cheIntercity Express hachina hanya nerambi dzvuku uye chingangodaro chakonzera tsaona iyi.
Czech Republic Gurukota Rezvekutakurwa Karel Havlicek anga aripo.